နိုင်းမိကျောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ကမ္ဘာ၌ ဒုတိယအကြီးဆုံး တွားသွားသတ္တဝါ
နိုင်းမိကျောင်း (ခရိုကိုဒီလပ် နီလိုတီကပ်)သည် အာဖရိကတွင် တွေ့ရသော မျိုးစိတ် ၄ မျိုးအနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ရှည်လျားသော အမြီးနှင့် အားကောင်းသော မေးရိုးများ ရှိသည်။ နောက်ခြေများသည် ရေကူးရန် ရေယက်များ ပါရှိသည်။ အလျားအားဖြင့် ၂၀ ft (၆.၁ m) ထိရှည်ကာ၊ ၁,၅၀၀ lb (၆၈၀ kg) ထိလေးသည်။ များသောအားဖြင့် အထီးသည် အမထက် ပို၍ကြီးမားလေ့ရှိသည်။
နိုင်းမိကျောင်းများကို မဒဂါစကာ၊ ဆာဟာရတပိုင်း အာဖရိကနှင့် နိုင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တို့၌ တွေ့ရှိရသည်။ ယခင်က ဂျော်ဒန်နှင့် အစ္စရေးတွင်လည်း တွေ့ရသည်။  မြစ်ချောင်းများ၊ မြစ်ဝများ၊ ရေချိုစိမ့်တောများနှင့် လမုတောရှိ ဗွက်တောများစသော အရပ်ဒေသအမျိုးမျိုး၌ နေထိုင်ကျက်စားသည်။.
နိုင်းမိကျောင်းသည် သားစားသတ္တဝါမျိုး ဖြစ်ကာ၊ အသားစားတတ်သည်။ အရွယ်ရောက်လာသော နိုင်းမိကျောင်းသည် မိမိထက်ကြီးသော သတ္တဝါများကို စားသည်။ မိကျောင်းငယ်များသည် အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့် ငါးသေးများကို စားပြီး၊ မိကျောင်းကြီးများသည် မြင်းကျား ၊ ဒရယ်ငယ်၊ ဆတ်ကျွဲ (wildebeest) နှင့် ကျွဲများကို ဖမ်းယူစားသောက်သည်။ နိုင်းမိကျောင်းသည် ရန်လိုတတ်ပြီး၊ အခြားမိကျောင်းများကိုပင် တိုက်ခိုက်သည်။
မိကျောင်းများသည် ရေထဲတွင် မိတ်လိုက်ပြီး၊ ၎င်းနောက် မိကျောင်းမသည် ကုန်းပေါ်၌ ကျင်းတူးကာ ဥများ ဥချသည်။ ဥအလုံး ၆၀ ထိ ဥနိုင်ကာ၊ ဥပေါက်ရန် ရက်ပေါင်း ၉၀ ခန့် ကြာမြင့်သည်။ နိုင်းမိကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားမှု တခုမှာ ဥများ ပေါက်လာသည်အထိ အမက စောင့်ရှောက်ကာကွယ် နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၂ နှစ်သား ရှိလာလျှင်၊ မိကျောင်းငယ်များသည် မျိုးပွားရန် စွမ်းနိုင်သည်။
နိုင်းမိကျောင်းသည် အာဖရိကတွင် ရေချိုဒေသနေ ကြီးမားသော မိကျောင်းမျိုး ဖြစ်ကာ၊ နိုင်ငံပေါင်း ၂၆ နိုင်ငံတွင် ကျက်စားသည်။ နေထိုင်ရာ ကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ ပုံမှန် သားပေါက်ခြင်းတို့ကြောင့်၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းက မျိုးတုံးရန် စိုးရိမ်ရမှု အနည်းဆုံးအဖြစ် IUCN စာရင်းနီတွင် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဆာဟာရတပိုင်း အာဖရိကအနှံ့အပြား တည်ရှိကာ၊ တိုက်ကြီး၏ ဗဟို၊ အရှေ့နှင့် တောင်ပိုင်းဒေသများ၌ တွေ့ရသည်။ ကန်၊ မြစ်၊ ရွှံနွံတောနှင့် စိမ့်စမ်း စသော ရေပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုး၌ နေထိုင်သည်။ ဆားပေါက်ဒေသတွင် နေထိုင်နိုင်စွမ်းသော်လည်း၊ ဤမျိုးစိတ်များသည် ရေငန်တွင် တွေ့ရခဲပြီး၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့် ဆားငန်ကန်များတွင် ရံခါ ကျက်စားသည်။ ဤမျိုးစိတ်၏ ခွင်သည် တခါက နိုင်းမြစ်ဝှမ်းမှ မြောက်ဘက်၊ နိုင်းမြစ်တလျှောက် မြောက်ဘက်ဆီသို့ ဖြန့်ကျက်ခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှ အရွယ်ရောက် နိုင်းမိကျောင်းထီးသည် ၃.၅ and ၅ m (၁၁.၅ and ၁၆.၄ ft) ကြား ရှိကာ၊ ၂၂၅ to ၇၅၀ kg (၅၀၀ to ၁,၆၅၀ lb) လေးနိုင်သည်။  သို့သော်လည်း၊ အရှည် ၆.၁ m (၂၀ ft)နှင့် ၁,၀၈၉ kg (၂,၄၀၀ lb) ကျော်သော မျိုးစိတ်များကို မှတ်တမ်းတင်ရဖူးသည်။ ၎င်းသည် အာဖရိကတွင် အကြီးဆုံး ရေချိုအမဲလိုက်မုဆိုး ဖြစ်ကာ၊ ခရိုကိုဒီလပ် ပိုရိုဆပ် ခေါ် ရေငန်မိကျောင်းပြီးလျှင်၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယအကြီးဆုံး တွားသွားသတ္တဝါ အဖြစ် မှတ်ယူနိုင်သည်။ ရုပ်လိင်ခွဲ (Sexual dimorphism; ရုပ်သွင်လက္ခဏာ ကြည့်ရုံနှင့် အထီးအမလိင် ခွဲခြားနိုင်ခြင်း) ထင်ရှားကာ၊ အမသည် အထီးထက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုငယ်သည်။ ထူထဲပြီး၊ အကြေးခွံများဖြင့် ပြည့်နေသော အရေပြား ရှိသည်။
နိုင်းမိကျောင်းများသည် အခွင့်ကောင်းရှာ အမဲလိုက်ကောင် ဖြစ်ပြီး၊ အရပ်ဒေသများသို့ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်တတ်သည်။ အခြားသတ္တဝါများ၏ နယ်ပယ်ကိုလည်း ဝင်ယူတတ်သည်။ အစုံစား၊ အစားကျူးပြီး၊ သားကောင်မျိုးစုံကို အမဲလိုက်သည်။ နေ့စဉ် စားသောက်သော သားကောင်မျိုးစိတ်များတွင် ငါး၊ တွားသွားများ၊ ငှက်များနှင့် နို့တိုက်များ အဓိက ပါဝင်သည်။ ချုံခိုတိုက်ခိုက်သော အမဲလိုက်ကောင် ဖြစ်ပြီး၊ နာရီ၊ ရက်နှင့်ချီ၍၊ တခါတရံ တိုက်ခိုက်ရန် သင့်တော်သည့် အချိန်ထိ ရက်သတ္တပတ်ထိ စောင့်စားနိုင်သည်။ ရန်လိုသော အမဲလိုက်ကောင် ဖြစ်ရာ၊ သားကောင်က မိမိခွင်ထဲ ရောက်သည်ထိ အခွင့်အရေးကို စောင့်နေတတ်သည်။ မည်မျှလွယ်ကူသော သားကောင်ဖြစ်စေ၊ တိုက်ခိုက်ရန် အလျင်မလိုချေ။ အခြားမိကျောင်းကဲ့သို့၊ နိုင်းမိကျောင်းများသည် ကိုက်မိလျှင် မလွတ်တမ်း ကိုက်နိုင်ကာ၊ ထက်မြပြီး ထုချွန်သဏ္ဌာန် သွားများက အသားထဲ နစ်သွားလျှင်၊ ရုန်းထွက်ရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။ လိုအပ်သည်ထိ အကြာကြီး ကိုက်ထားနိုင်ပြီး၊ သားကောင်ကို ရေမွန်းသွားအောင် ရေအောက်ထဲ ဆွဲချတတ်သည်။
နိုင်းမိကျောင်းများသည် အတော် အလိုက်သိသော မိကျောင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ နေဆာလှုံကွက်နှင့် အစားရင်းမြစ်ကြီးများကို အတူမျှဝေသည်။ အစားရင်းမြစ်ကြီးမှာ ငါးအုပ်ကြီးနှင့် သားကောင်ကြီးများကို ဆိုလိုသည်။ တင်းကြပ်သော ရာထူးဝါစဉ် ရှိကာ၊ အရွယ်အစားနှင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ကြီးမားသော အထီးကြီးများသည် ဝါစဉ် ထိပ်ဆုံးမှာ နေကာ၊ အစာများစွာနှင့် နေဆာလှုံကွက်ကောင်းကို ရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိသည်။ ဤစည်းမျဉ်းကို မိကျောင်းများက လိုက်နာရပြီး၊ ထိပါးချိုးဖောက်ပါက၊ မကြာခဏ အကြမ်းဖက်ခံရပြီး သေသည်ထိ ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ အခြားတွားသွားကောင်အများစုကဲ့သို့၊ နိုင်းမိကျောင်းများသည် အမက ဥဥပြီး၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည်။ ဥမှပေါက်သော မိကျောင်းပေါက်များကို အချိန်တခုထိ စောင့်ရှောက်ပေးသော်လည်း၊ အမဲကို ကိုယ်တိုင်လိုက်ရကာ၊ မိဘက ရှာဖွေမကျွေးပေ။ နိုင်းမိကျောင်းသည် အန္တရာယ် အရှိဆုံး မိကျောင်းမျိုးနွယ်ထဲ ပါဝင်ပြီး၊ ယင်းတို့ကြောင့် နှစ်စဉ် လူရာပေါင်းများစွာ သေဆုံးနေရသည်။ အချို့ဒေသများဝယ် ကောင်ရေ လျော့နည်းသွားခြင်း၊ မျိုးတုံးသွားခြင်း ရှိသော်လည်း၊ မျိုးတုံးအန္တရာယ်ရှိသည့် အဆင့်မရောက်သေးချေ။
အခုလက်ရှိတွင် မျိုးစိတ်ခွဲများကို တရားဝင် အသိအမှတ် မပြုထားသော်လည်း၊ အာဖရိကတလျှောက် ပြန့်နှံ့ ကျက်စားနေသော အုပ်စုများ၏ ပုံပန်းသွင်ပြင်နှင့် အရွယ်အစားအလိုက် ခုနစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်မည်ဟု ယူဆကြသည်။
ယင်းတို့မှာ စီ အင် အာဖရိကနပ် C. n. africanus (အရှေ့အာဖရိကနိုင်းမိကျောင်းဟု တရားမဝင်အမည်ပေးထား)၊ စီအင် ချံစစ် C. n. chamses (သို့မဟုတ် အနောက်အာဖရိက နိုင်းမိကျောင်း)၊ စီအင် ကိုဝေး C. n. cowiei (တောင်အာဖရိက နိုင်းမိကျောင်း)၊ စီအင် မဒါဂါစကာရီယင်းစစ် C. n. madagascariensis (မလဂါစီ သို့မဟုတ် မဒဂါစကာ နိုင်းမိကျောင်း၊ ဒေသခံများက ခရိုကို မာဒါဟု ခေါ်၊ ဘာသာပြန်သော် မလဂါစီမိကျောင်း ဟူလို)၊ စီအင် နီလိုတီကပ် C. n. niloticus (ထင်ရှားသော မျိုးစိတ်ခွဲ ဖြစ်မည်၊ သို့မဟုတ် အီသီယိုးပီးယား နိုင်းမိကျောင်း)၊ စီအင် ပေါ်ဆီစကူတေးတပ် C. n. pauciscutatus (ကင်ညာ နိုင်းမိကျောင်း)၊ စီအင် စုချပ် C. (n.) suchus (အနောက်အာဖရိကမိကျောင်းဟု သိကြပြီး၊ ယခုအခါ မိကျောင်းဇီဝပညာရှင်များက သီးခြားမျိုးစိတ်အဖြစ် လက်ခံလိုက်ကြပြီ)တို့ ဖြစ်ကြသည်။စီအင် စုချပ် ပါဝင်သော မိကျောင်းအုပ်စုကို ရုပ်သွင်ပညာအရ လေ့လာရာ၊ နိုင်းမိကျောင်း၏ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်သည် အခုလက်ရှိ သတ်မှတ်လက်ခံထားသော အခြားမိကျောင်းမျိုးစိတ်များထက် အပြောင်းအလဲများကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဤသည်မှာလည်း အချို့ပုံပန်းသဏ္ဌာန် ပြောင်းလွဲခြင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်ရခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ Nile Crocodile။ National Geographic (January 14, 2016)။ January 14, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ Nile crocodile - Crocodylus niloticus။ arkive.org (2012)။ 23 January 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 November 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named iucn
↑ Pooley, A. C. (1982)။ "The status of African crocodiles in 1980"။ Crocodiles. Proceedings of the 5th Working Meeting of the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group, Gainesville, Florida။ Gland, Switzerland: IUCN Crocodile Specialist Group။ pp. 174–228။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Cott, H.B. (2010). "Scientific results of an inquiry into the ecology and economic status of the Nile crocodile (Crocodilus niloticus) in Uganda and Northern Rhodesia". The Transactions of the Zoological Society of London 29 (4): 211–356. doi:10.1111/j.1096-3642.1961.tb00220.x.
↑ Alexander, G. & Marais, J. (2007)။ A guide to the reptiles of southern Africa။ Cape Town: Struik Publishers။ Cite uses deprecated parameter |last-author-amp= (အကူအညီ)
↑ de Boer, W. F. (2010). "Spatial distribution of lion kills determined by the water dependency of prey species". Journal of Mammalogy 91 (5): 1280. doi:10.1644/09-MAMM-A-392.1.
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ Guggisberg, C.A.W. (1972)။ Crocodiles: Their Natural History, Folklore, and Conservation။ p. 195။ ISBN 978-0-7153-5272-4။
↑ Huchzermeyer, F. (2003). Crocodiles: Biology, Husbandry, Diseases. CABI International Publishing. UK and Massachusetts.
↑ Garrick, L. D. (1977). "Social signals and behaviors of adult alligators and crocodiles". American Zoologist 17: 225–239. doi:10.1093/icb/17.1.225.
↑ Kofron, C. P. (1990). "The reproductive cycle of the Nile crocodile (Crocodylus niloticus)". Journal of Zoology 221 (3): 477–488. doi:10.1111/j.1469-7998.1990.tb04014.x.
↑ Sideleau, B. & Britton, A. R. C. (2012)။ "A preliminary analysis of worldwide crocodilian attacks"။ Crocodiles. Proceedings of the 21st Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group။ Gland: IUCN Crocodile Specialist Group။ pp. 111–114။ Cite uses deprecated parameter |last-author-amp= (အကူအညီ)
↑ IUCN-SSC Crocodile Specialist Group။ Crocodilian.com။ 2013-04-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Schmitz
↑ Nestler, J.H. (2012)၊ A geometric morphometric analysis of Crocodylus niloticus: evidence foracryptic species complex၊ University of Iowa
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်းမိကျောင်း&oldid=623867" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။